Musuqa iyo musharrixiinta Puntland: Yaa la aaminaa? (dhegayso) – Radio Daljir
Musuqa iyo musharrixiinta Puntland: Yaa la aaminaa? (dhegayso)
Diseenbar 5, 2018 9:21 g 2
Xilli musharrixiinta isku soo sharaxay xilka hoggaanka sare ee Puntland ay ku dhowyihiin 30 musharrax ayaa waxaa soo ifbaxaya in qaar kamid ah musharrixintu ay yihin kuwo ku lugleh iyo kuwo lagu eedeyeey musuqmaasuq baahsan oo aan cidna loogu aabboyeelin.
Musharraxiinta la eedaynayo waxaa kamid ah Asad Cismaan Cabdullaahi Diyaano oo horey u ahaa Agaasimaha Hay’adda PSF. Musharrax Assad ayaa horay xilkii Agaasimaha ugala wareegay aabihi Cismaan Diyaano, markii uu xilka ka degayna ku wareejiyey walaalkiis, Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano. Intaas kaliya ma aha e dhammaan hoggaanka hay’adda uu madaxa ka ahaa ee ammaanka Puntland ayaa waxaa hoggaan u ah qaraabada dhow ee isla musharrax Assad Cismaan Diyaano.
Ammuurahaas iyo musuqa baahsan ee Puntland ka hanaqaaday shantii sano ee la soo dhaafay waxa aan si xogogaalnimo ah uga wareysanay wariye Cali Xaraare. Cali Xaraare ayaa hore faallooyin xogogaal ah ka diyaariyey musharrixiinta Puntland ee lagu eedeyeey musuq baahsan, musuqaas oo maanta shacabka Puntland ay saameynta ugu weyn tahay dhanka ammaanka iyo dhaqaalaha.
Arrin kale oo asbuucyada soo socda Daljir dabagali doonto ayaa ah Assad Cismaan oo taageerayaashiisa iyo sawirada kaambaynkiisu muujiyaan in uu yahay Janaraal goorma ayuu noqday Janaraal, sidee se ku noqday, da’diisu se weli ma gaartay 40 sano jir. Daljir kala soco.
Axmed Shiikh Maxamed (Tallman) ayaa warbixinta musuqa iyo musharrixiinta Puntland inoo haya.
Jama 5 months
Tolman ad ban u xiisenayey warkaa lakin xaraare inaad wareesato ma aheen.wa nin aad u neceb putinland.
Asmaa cbdi cismaan 5 months
Magcgu waa asmaa cabdi o jogtaa buntlan gar ahn gobolka karkaar hadii an kaa dhiibto fekerkygaa asaad wa halyey qardhaan runtii wa rux u qalma xilka madxtinimo e buntlan 2019 waxa nin dhaanka abniiga xelaad ku leh wa nin kaa qabtay buntlan hawl galo badan runt wxan dhihi karaa ma jiro rux uga haboon xilkaa manty ninkaa